Warar - Isbeddel mustaqbalka ah - silsilad sahay ah oo dhan oo ka mid ah horumarinta ganacsiga e-ganacsiga
Sida laga soo xigtay websaydhada Maamulka Guud ee Kastamyada, ganacsiga e-xuduudaha ayaa si xawli ah u koraya. Sannadkii 2020, 2.45 bilyan oo ah liisaska soo dejinta iyo dhoofinta ayaa lagu oggolaaday iyada oo loo marayo maareynta maareynta ganacsiga e-xuduudaha ee kastamka, iyadoo koror sanadle ah oo ah 63.3% la barbardhigo sanadkii ka horreeyay. Xogta ayaa muujineysa in Shiinaha (Hangzhou) Aagga Iskutallaabta E-commerce Comprehensive Zone Pilot (Xiasha Industrial Zone), oo ah baarkinka ugu weyn ee ganacsiga e-commerce ee ku yaal Shiinaha iyo qaybaha badeecadaha ugu dhammaystiran, ay leeyihiin 46 milyan oo gogo '11.11 oo kayd ah 2020, koror 11% ah. Isla mar ahaantaana, badeecadaha 11.11 ee baarkinka ku yaal ayaa ka tiro badan sannadihii hore, ilahaasna waxay ka kala yimaadeen dhammaanba Japan, Kuuriyada Koonfureed, Jarmalka iyo waddamo kale iyo gobollo. Intaa waxaa sii dheer, in ka badan 70% ee ka ganacsiga waddamada xuduudaha isaga gudba ee e-commerce loo dhoofiyo adduunka oo dhan iyada oo loo marayo gobolka Pearl River Delta ee Guangdong, iyo ganacsiga Guangdong ee xudduudaha ka gudba ayaa inta badan ku wajahan dhoofinta halkii laga soo dejin lahaa .
Intaa waxaa dheer, saddexda rubuc ee hore ee 2020, Shiinaha soo dejinta iyo dhoofinta xudduudaha maareynta ganacsiga e-commerce waxay gaareen 187.39 bilyan RMB, taas oo ku guuleysatay kobaca sanadlaha ah ee 52.8% isbarbardhigaya tirooyinka isla waqtigaas ee 2019 .
Maaddaama e-ganacsiga xudduudaha ka soo gudbayaa uu noqday mid sii kordhaya oo si wanaagsan u bislaaday, oo sidoo kale u muuqda qaar ka mid ah warshadaha siyaada ah ee la xiriira, waxay siinaysaa ganacsiyada xuduudaha ee Shiinaha fursado badan. Qof kastaa uma tagi doono inuu diiwaangaliyo astaamaha, abuuro degello internet, dukaan furo, ama noqdo alaab-qeybiye, laakiin wuxuu u qaban karaa adeegga kaabayaasha taageerada ee shirkadahaas e-commerce ee ka gudba xudduudaha, laga bilaabo silsiladda wax soo saarka ilaa astaamaha, laga soo bilaabo barxadda adeegga si kor loogu qaado, laga bilaabo lacagaha ilaa saadka, laga bilaabo caymiska ilaa adeegga macaamiisha, qayb kasta oo ka mid ah silsiladda oo dhan waxaa laga soo qaadan karaa qaab ganacsi cusub oo xirfad leh.